Shiinaha Spa Bath hadiyad Basket Set Lavender-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Haida
BARNAAMIJKA: Dhag dhag
Urka Lavender-ka ayaa ah mid dejinaya oo la jecel yahay .Jirkaaga ha ka qoydo wanaagga intaad maqaarkaaga ku dhex jabinayso alaabada qubeyska ugu fiican.
DHAMMAAN HADA SIYAASADDA AH Waxay ka kooban tahay saliid qubeys ah 180ml, 180mm qubeyska xumbo, 50ml subagga jirka, 30ml saliid qubays, 100g cusbo qubeys ah, 100g bambo qubeys ah, 120g saabuun qubeyska, loofah gadaal xoqe, iyo dambiil gacmeed tolmo leh oo lagu qurxiyo ama lagu keydiyo.
Subagga jirka -Macsalaam Fiican si aad u qalajiso maqaarka qalalan. Looshan jirka ayaa nafaqeyn doonta oo qoyn doonta maqaarkaaga adiga oo kaaga tagi doona udgoon fiican, ur jilicsan.
Maydho Jel -Wax yar oo jel ah mari gacmaha ama isbuunyo jilicsan oo qoyan - si aad uhesho lakab hodan ah oo kareem leh. Waxaad sharad aad dareemi doontaa faraqa.
Qubeyska xumbo-Ma jiraan wax la mid ah qubeyska xumbo kulul si loo dajiyo murqaha daalan oo loo nasto jirka. Qubayskan xumbada leh ee jilicsan ayaa abuuraya xumbo badan oo xumbo ah wuxuuna uumiyaa oo u jilciyaa maqaarka intaad qoyso.
Qubeyska Cusbo-Ku shub qaddar deeqsinimo leh biyo diiran oo socda. Biyo walaaq si ay u caawiso kala-baxa kristantarrada.
Dhag dhag Qubeyska Saliid- Dejinta Maskaxdaada iyo Jirkaaga. Waxaa ka mid ah saliida lama huraanka ah ee loo yaqaan 'lavender oil', oo caan ku ah xasilinta iyo nasashada guryaha, kuu keena riyooyin macaan. Welwelkaagu ha ku milmo biyaha.
Qarixii Bath-kaliya bamgaaga tuubada qubeyska oo sug firaaqu inuu mashquul noqdo.
Saabuunta qubeyska- Ku qufo lakab xoog leh iyo udgoon udgoon markii aad qaadanaysid qubeys ama qubeys nasasho leh.
Waxyaabaha nafaqada leh: Wax kasta oo ku jira qolka qubeyska waxaa laga sameeyaa maaddooyinka ugu sarreeya ee la qiimeeyo iyo kuwa dabiiciga ah, oo ay ku jiraan saliidda geedka gabbaldayaha iyo fitamiin E, iyadoo diiradda la saarayo qoyaanka iyo jilicsanaanta maqaarka. (dhammaan nooca maqaarka)
Hore: Dhaqo Jidh-dilis maalinle ah oo loogu talagalay maqaarka qalalan oo lagu dejiyo
Xiga: Nasashada Hadiyada Qubayska ee Loogu Talo Galay Maalinta Hooyooyinka Fikradaha Hadiyadaha Fasaxa Dhalashada ee Hooyo
Dambiisha Hadiyadaha Hoyga ee Hoyga - Raaxo 7 Gabal ...
Lavender Dabiiciga Jirka Toner Buufin - Dheeraad ah ...
Lavender Body Butter Body iyo Gacanta Looshinka ...